Qiimaynta Waxqabadka Aasaaska
Xarunta loogu talagalay fayodhowrka wax ku oolka ah, koox cilmi-baaris oo madaxbannaan oo madaxbannaan, ayaa sameeya sahan aqoonsi ah ku saabsan hannaanka deeq-lacageedka, isgaarsiinta, iyo saameynta guud. Waxay soo saartaa Warbixinta Dareenka Dakhliga ee saddexda sano ah. Saddexdii ugu dambeysay ee warbixinnadan waxaa laga heli karaa halkan:
Warbixinta Dareenka Deeqaha ee 2016
Warbixinta Sheegashada Deeqaha ee 2013-ka
Warbixinta Gargaarka Deeqaha ee 2010
Maaddaama ay tahay aasaaska qoyska, McKnight waxaa maamula guddi ilaa 12 oo ka mid ah agaasimayaasha ka soo farcamay aasaasayaasha iyo sidoo kale jaaliyada (sida aan ahayn qoyska). Marka la ogaado xubnaha cusub ee jaaliyada, guddiga McKnight wuxuu tixgeliyaa xirfadaha iyo waayo-aragnimada maamulayaasha mustaqbalka, iyo sidoo kale sida xirfadahani u dhamaystiri doonaan khabiir horey loogu sii wado guddiga. Xubnaha bulshada waxay u adeegaan mudo sadex sano ah; hal sano oo halis ah ayaa loo baahan yahay ka dib saddex xilli oo isku xiga.
Guddiga maamulku wuxuu u xilsaaray shan guddiyo si ay u caawiyaan fulinta waajibaadkooda: Guddiga Hanti-Dhowrka / Maaliyadda (miisaaniyadda, xisaabinta sanadlaha, dib-u-eegga maaliyadeed), Guddiga Fulinta (taageerada guddoomiye, dib-u-eegista madaxweynaha sanadlaha, iyo tallaabooyinka muhiimka ah ee u dhaxeeya kulamada guddiga) Guddiga (halabuurka guddiga iyo wax-ku-oolnimada), Guddiga Maal-gelinta (maal-galinta iyo arrimaha macaamilka), iyo Guddiga Hagaajinta Miisaaniyadda (saameynta maalgalinta, MDI, iyo PRI).
Mashruuca McKnight wuxuu ujeedkiisu yahay inuu sii wado barnaamijka magdhawga guud ee caddaalad ah, caddaalad ah, iyo tartanka tartanka ah ee soo jiidanaya, wuxuuna hayaa shaqaale tayo sare leh si loo hormariyo hadafka ururka. Foundation wuxuu isticmaalaa macluumaadka magdhawga iyo faa'idooyinka laga helo aasaasaha gaarka ah oo leh qiyaasta hantida ee si macquul ah ugu dhawaanshaha hantida McKnight sida ururrada qiyaasta.
Iskuduwaha Siyaasadda Dhibcaha
Inkasta oo aasaasuhu uu qiray in khilaafaadka suurtagalka ah ee laga yaabo in ay dhici karto wakhtiiba mar uun, waxaanu ku dadaalnaa sidii aan u maamuli lahayn iyaga oo si buuxda u bixinaya. Nidaamyada kale, dhammaan guddida McKnight iyo xubnaha shaqaalaha ayaa looga baahan yahay inay dhammaystiraan Qoraalka Khilaafaadka Khilaafaadka sanad kasta.
Halkan waa soo koobid buug-gacmeedka Shaqaalahayaga:
Qoraalka Khilaafaadka Khilaafaadka ayaa tilmaamaya cilaaqaadka keeni kara khilaaf dhab ah ama mid la aqoonsan yahay. Madaxa Aasaaska, kooxda hoggaanka sare, iyo guddiga maamulka ayaa dib u eegi doona soo koobidda Qorshaha Khilaafaadka Dhameystiran.
Haddii aad haysato dhab ahaan ama aad aragto iska horimaad shakhsiyadeed ama mid dhaqaale leh, waa inaad u sheegtaa oo aad dib uga noqotaa doodaha iyo go'aan qaadashada ku lug leh dhinacyadan. Shaacinta iyo soo-jeedinta noocan oo kale ah waa in lagu xusaa daqiiqadaha kulanka, mar kasta oo ay macquul tahay. Sidoo kale, marka wadahadal lala yeesho hay'adda wuxuu ku dhex jiraa urur kaas oo shaqaale ama xubin ka mid ah guddiga uu leeyahay ku-xirnaansho, shaqaalaha ama xubinaha guddiga waa in ay iska kaashadaan doodahaan.
Guud ahaan, shaqaalaha barnaamijka iyo xubnahooda ku dhow ee qoyska ayaa ka niyad-jabsan xiriirka shakhsi ahaaneed ee haysta deeq bixiyeyaasha ama deeq-bixiyeyaasha deeq-lacageed ee ka jira gudaha barnaamijka deeq-lacageedka deeq-lacageedka.
Ballaarinta Kala duwanaanta
Maktabadda McKnight waxaa ka go'an inay kala duwanaanta, sinaanta, iyo ka mid noqoshada qiimaha asaasiga ah.
Kala duwanaanta: Waanu qadarineynaa oo ka faa'iideysanaynaa kala duwanaanshaheena; oo aan ku lug yeelano oo aan ka tarjabno bulshooyinka aanu u adeegno.
Sinnaanta: Waxaan u dhigmeynaa siyaasadeena, dhaqannada, iyo khayraadka si dadka dadka jinsiyada ah, dhaqamada, iyo xaaladaha bulsho-dhaqameedba ay leeyihiin fursado dhab ah oo lagu horumarinayo.
Ka mid noqoshada: Waxaan abuurnaa deegaan kaas oo qof kastaa uu dareemayo qiime leh oo la ixtiraamo.
Ballan-qaadkani waa mid muhiim ah si loo xoojiyo xiriirkeena, kalsoonida, iyo waxtarka, waxaanu xoojin doonaa dedaalkayaga si loo hagaajiyo nolosha jiilalka hadda iyo mustaqbalka. Dhaqaalaha bulshada iyo dhaqaalaha ee gobolka Minnesota, oo loo yaqaanno Mni Sota Makoce by Dakota, waxay ku xiran tahay dhammaan fursadaha loo dhan yahay iyo kuwa siman.
Akhri buuxa bayaanka.
Warbixinta maaliyadeed ee ugu dambeysay McKnight, xisaabtanka sanadlaha ah, iyo xogta canshuurta ayaa laga heli karaa halkan.
Qoraalka Siyaasadda Maalgashiga McKnight ayaa la heli karaa halkan.
McKnight wuxuu leeyahay nidaam ay ku shaqeeyaan shaqaalaha si ay u soo aruuriyaan arimaha gudaha iyada oo loo marayo khadka telefoonka qarsoodiga ah.
Waa kuwan siyaasadda buug-gacmeedka Shaqaalahayaga ee ku saabsan sida aan u hirgelinno hababka loo yaqaan "whistleblower":
Machadka McKnight wuxuu u hoggaansamaa heerarka ugu sareeya ee furfurnaanta, caqligalka, iyo xisaabtanka.
Muuqaal muhiim ah oo la xisaabtanka iyo daahfurnaanta waa hab laguugu saamixin karo adiga iyo shaqaalaha kale si aad u codsato walaac ku saabsan habdhaqan wax ku ool ah.
Sharciga dulsaarka ra'yiga dadweynaha, oo dhaqan galay 1999-kii, wuxuu siinayaa ilaalin sharci ah shaqaalaha in laga saaro ama lagu ciqaabiyo loo-shaqeeyayaashooda sababtoo ah dadweynaha oo soo bandhigaya walaacyo dhab ah Waa in la xoojiyaa in siyaasaddan loogu talagalay in lagu caawiyo shakhsiyaadka aaminsan waxay kasbadeen wax xumeyn ama aan habooneyn. Looma qorsheynin in la is waydiiyo go'aanka maaliyadeed ama ganacsiga ee ay qaadeen Hay'adda mana loo isticmaali karo in dib loo fiiriyo wixii arrimo horay loo soo qabtay iyadoo loo marayo handadaad, cabasho, anshax, ama habab kale. Haddii ay suurtogal tahay, aasaasku wuxuu kaa codsanayaa in aad codkaaga cabto gudaha gudaha, isla markaasna aasaas siiso fursad ay wax uga qabato. Haddii aysan suurtagal ahayn, fadlan isticmaal khadka qarsoodiga ah ee qarsoodiga ah. La soco xiriirkan si aad u hesho macluumaad ku saabsan sida loo heli karo khadadka telefoonka iyo wixii aad filan karto markaad wadaagto cabasho.
Nidaamkan waxaa loogu talagalay in adiga ama shaqaalaha kale kuu suurtogeliso in ay soo gudbiyaan cabashooyinka gudaha gudaha iyo heerka sare iyo in la soo bandhigo macluumaadka aad aaminsan tahay in ay muujinayso xumayn ama aan haboonayn. Siyaasaddan waxaa loogu talagalay in ay soo bandhigto walaacyada ku jira danta dadweynaha waxaana ugu yaraan laga yaabaa in ugu horreyn lagu baari karo si gaar ah laakiin waxaa laga yaabaa inay keenaan qaylo-dhaan ah hababka kale sida
anshax. Walaacyadaas waxaa ka mid noqon kara:
Xasaasiyad lacageed ama aan habooneyn ama khiyaano
Ku guuldareysiga inaad u hogaansanto waajibaad sharciyeed ama xeerarka
Khataraha Caafimaadka & Ammaanka ama deegaanka
Habdhaqan aan habooneyn ama dabeecad xumo
Isku day in aad qariso mid ka mid ah waxyaabaha kor lagu taxay
Dib-u-hanjabaad iyo Difaac Shaqaale kale
a. Ilaalinta. Nidaamkan waxaa loogu talagalay inuu ku siiyo badbaado haddii aad shaac ka qaadid walaacyadaas
haddii bixinta la sameeyo:
rumaysiga macquulka ah ee u muuqda in ay u muuqato in uu muujiyo xumeyn ama aan habooneyn;
qof ku habboon (eeg hoos).
Shaqaale looma aargoosi doono si loo sameeyo warbixinta diiniga ah ee ku xadgudubka sharciga federaalka, gobolka, ama sharciga degaanka ama maareynta maareynta Aasaaska ama sharci fulinta ama hay'ad kale oo dawladeed.
b. Sirta. Machadka McKnight wuxuu daaweynayaa dhammaan shaac-bixinnadaas sida ugu macquulsan.
c. Doodaha qarsoodiga ah. Siyaasaddani waxay ku dhiirrigelisaa shakhsiyaadka in ay magacooda u sheegaan wixii ay soo bandhigeen. Dhibaatooyinka qarsoodiga ah ee la muujiyay way adagtahay in la baaro.
Nidaamka Hirgelinta Shaacinta
Foundation wuxuu ku dhiirigeliyaa shaqaalaha rumaysadka ku kalsoon ee ku xadgudubka sharciga federaalka, gobolka, ama sharciga degaanka ama xeerka si uu ugu wargaliyo Waalidka Hawlaha haddii aysan cabashadu ka soo horjeesan Wakiilka Hawlaha ama si kasta oo la xidhiidha tallaabooyinka ee Wakiilka Hawlaha. Xaaladaha noocaas ah, cabashadu waa in loo gudbiyaa Waddanka Maaliyadda iyo Mabaadi'da ama Madaxwaynaha.
Sababtoo ah nooca kala duwan ee noocyada cabashooyinka, oo laga yaabo inay ku lug yeeshaan baarayaasha gudaha iyo / ama booliska, suurtogal maaha in la dhigo waqtiga saxda ah ee baaritaannada noocaas ah. Sarkaalka baaritaanka waa in uu xaqiijiyaa in baaritaannada sida ugu dhakhsaha badan ay suurtogal u tahay iyada oo aan saameyn ku yeelan tayada iyo qoto-dheeraanta baaritaanadaas.
Transparent iyo Xisaabtan
Iyada oo ay la socdaan in kabadan 100 aasaaska kale, Ururka McKnight Foundation waa qeyb ka mid ah GlassPockets Initiative, kaas oo u ololeeya furfurnaan ballaaran oo ka timaadda qeybta samafalka. Waxaan gaarnay Heerka Champion-ka ee daah furnaanta waxaana loo aqoonsan yahay inaan riixeynno xuduudaha jira ee daah furnaanta aasaasiga ah. Halkan, waxaan ku soo bandhigeynaa siyaasadahayaga maamul iyo ku dhaqanka.